Verse by Verse – Daily Devotion
A verse by verse study from the Word of God
Bible / Teachings / Verse by Verse
२०. अहिले म तिमीहरुसँग मेरो बोल्ने तरिका बदल्न सके कति असल हुनेथियो, किनकी तिमीहरुका विषयमा म अन्योलमा परेको छु ।तिनीहरुसँग रहेर असल प्रकारले कुरा गर्ने उत्कट चाहना पावलसँग थियो ।…
११. परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही मानिस धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ किनभने “धर्मीचाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ ।” सन १४८३ मा जर्मनीको आइसलबेन सहरमा एक गरीब परिवारमा मार्टिन भन्ने व्यक्तिको…
११. तर जब केफास एन्टिओखियामा आए, तब मैले उनलाई खुल्लामखुल्ला विरोध गरें । किनकी उनी दोषी दिए ।प्रेरित पत्रुसलाई धेरै यहूदीहरुले प्रमुख प्रेरितको रुपमा मान्ने गर्छन् । यस पदले देखाउछ…
१. जब तिनीहरुले मलाई भने, “परमप्रभुको भवनमा जाओ,” तब म आनन्दित भएँ ।यरुशलेममा आराधना गर्न जाने विषयमा दाऊद अन्यन्तै आनन्दित भएको छ । यो उनको निम्ति कुनै दैनिकी वा बाध्यता…
Teachings / Verse by Verse
अन्यजातिहरुका निम्ति पावलको बोलावट (गलाती २ः १-१०)
पत्रुस लगायत अन्य प्रेरितहरुद्वारा परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार विशेष गरी यहूदीहरुमा वृहत रुपमा पैmलिदै गयो । तर विरोध तिव्र हुदै जाँदा फलस्वरुप स्तिफनसलाई ढुङ्गा हानी मारियो (प्रे ७) । त्यसपछि सुसमाचार…
६. मलाई आश्चर्य लागिरहेछ, कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरुलाई बोलाउनुहुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरु भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ ।७. वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोहीकोही छन्, जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न…